Zvakanakira nekukanganisa kwakasiyana mavharuvhu - China Senge Valve (Tianjin)
Zvakanakira nekukanganisa kwakasiyana mavharuvhu
1. Gedhi vharafu yesuwo inoreva vharuvhu inofambiswa nenhengo inovhara (RAM) munzira yakatwasuka yeiyo axis. Inonyanya kushandiswa senge yekucheka pombi, kureva kuti, yakavhurika kana yakavharwa. Kazhinji, mavhavha egedhi haashandiswe sekutenderedza kuyerera. Inogona kushandiswa yakaderera tembiricha kumanikidza kana kwakanyanya tembiricha uye yakanyanya kumanikidza, uye inogona kugadzirwa akasiyana zvinhu zvevhavha. Asi vharuvhu yesuo haiwanzoshandiswa mupombi dzinoendesa matope nezvimwe zvinoburitsa nhau
Kurwisa kwemvura kushoma;
Required Iyo torque inodikanwa pakuvhura nekuvhara idiki;
③ Inogona kushandiswa mune yeineti network pombi ine yepakati kuyerera munzira mbiri, ndiko kuti, kuyerera kwekutungamira kwepakati hakuganhurwe;
④ Kana yakanyatso kuvhurika, kudengenyeka kwenzvimbo yekuisa chisimbiso nekushanda nepakati kudiki pane kwevhavha yekumira;
Chimiro chemuviri chiri nyore uye tekinoroji yekugadzira iri nani;
⑥ Kureba kwechimiro ipfupi.
① Iyo yekunze dhizaini uye yekuvhura kukwirira yakakura, uye iyo nzvimbo yekumisikidza zvakare yakakura;
② Mukuita kwekuvhura nekuvhara, iyo yekuisa chisimbiso pamusoro ingangoita kupokana, uye iko kukakavara kwakakura, kunyangwe zviri nyore kukonzeresa abrasion chiitiko mukukwirira tembiricha;
Ally Kazhinji, mavhavha egedhi ane maviri ekuisa chisimbiso, ayo anowedzera mamwe matambudziko mukugadzirisa, kukuya nekugadzirisa;
Opening Nguva yekuvhura nekuvhara yakareba.
2. Butterfly vharuvhu : shavishavi vharuvhu iri vharau iyo inoshandisa dhisiki mhando kuvhura nekuvhara zvikamu kutendeuka neshure nezve 90 ° kuvhura, kuvhara uye kugadzirisa iyo fluid nzira.
① Iyo ine yakapusa dhizaini, diki vhoriyamu, kurema uremu uye yakaderera kudyiwa, uye haina kushandiswa mune hombe caliber vharafu;
② Kuvhura nekuvhara kunokurumidza, uye kuyerera kwekushomeka kudiki;
③ Inogona kushandiswa pakati nepakati yakaturikwa zvidimbu, uye inogona kushandiswa muupfu uye granular media maererano nesimba rekuvhara chisimbiso. Inogona kushandiswa kune maviri-nzira kuvhura uye kuvhara kwe mweya uye guruva kubvisa pombi, uye inoshandiswa zvakanyanya mugesi mapaipi uye nzira dzemvura yesimbi, indasitiri yakajeka, simba uye petrochemical masisitimu.
① Iyo yekuyerera mutemo renji haina kukura, kana kuvhura kwasvika 30%, kuyerera kunopinda zvinopfuura 95%;
② Nekuda kwekukamisikidzwa kwe butterfly vharuvhu dhizaini uye yekuisa chisimbiso zvinhu, haina kukodzera kune yakanyanya tembiricha uye yakakwira yekumanikidza pombi system. Iyo tembiricha yekushanda iri pazasi pe300 ℃ uye PN40;
Kuiswa chisimbiso kunoitwa kwakashata kana tichienzanisa nevharuvhu yebhora uye vharuvhu yekumira, saka haina kunyanya kukwirisa.
3. Bhora vharuvhu : yakashanduka kubva muvhavha yepulagi. Kuvhura nekuvhara zvikamu zvaro idenderedzwa, iro rinogona kuvhurwa nekuvharwa nekutenderedza bhora 90 ° kutenderedza axis yehunde. Bhora vharuvhu rinonyanya kushandiswa mupayipi kudimbura, kugovera uye nekushandura kuyerera kwekufamba kwepakati. Iyo vharuvhu yakagadzirirwa seyakavhurika-yakaita kuvhurwa zvakare ine yakanaka kuyerera mutemo basa.
① Kuyerera kwekushomeka ndiko kwakaderera kwazvo (chaiko 0);
② Inogona kushandiswa mukuparadza svikiro uye yakadzika kufashaira mvura zvakavimbika nekuti haizonamatwe mukushanda (kana pasina girisi);
③ Mune huwandu hwekumanikidza uye tembiricha, kuiswa chisimbiso kunogona kuitika zvizere;
④ Inogona kuona kukurumidza kuvhura nekuvhara, uye nguva yekuvhura nekuvhara yezvimwe zvimiro ingori 0.05-0.1s, kuitira kuve nechokwadi chekuti inogona kushandiswa mune yekushandisa system yebvunzo bhenji. Kana iyo vharuvhu ikavhurwa uye ikavharwa nekukurumidza, mashandiro acho haana chekuita;
⑤ Bhora rekuvhara zvikamu zvinogona kuiswa otomatiki panzvimbo yemuganho;
⑥ Svikiro rinoshanda rakavharwa zvakavimbika pamativi ese;
⑦ Kana yakavhurika zvizere uye yakavharwa zvizere, iyo yekumira pamusoro pebhora uye chigaro yakasarudzika kubva kune yepakati, saka iyo yepakati ichipfuura nepakati pevhavha kumhanya kwazvo haizokonzere kukukurwa kwenzvimbo yekuisa chisimbiso;
⑧ Inoonekwa seyakanyanya kugadzirisa vharuvhu dhizaini yepasi tembiricha yepakati nekuda kwekuumbwa kwayo uye kurema kurema;
Body Muviri wevhavha wakaenzana, kunyanya iro rakasungirirwa chimiro chemuviri wevhavha, iyo inogona kutakura kunetseka kubva pombi zvakanaka;
⑩ Izvo zvikamu zvekuvhara zvinogona kumira musiyano wepamusoro kumanikidza kana uchivhara. (11) bhora vharafu ine yakazara welded vharuvhu muviri inogona kuvigwa yakananga pasi pevhu, izvo zvinoita kuti vharuvhu internals vasununguke kubva kuora, uye iyo yakanyanya sevhisi hupenyu hunogona kusvika makore makumi matatu, inova iyo yakanyanya kunaka vharuvhu yemafuta uye gasi mapaipi epasi.
① Nekuti iyo yekuisa chisimbiso mhete yezvigaro zvevharuvhu ndeye polytetrafluoroethylene, inert kune angangoita ese makemikari zvinhu, uye ine hunhu hweye diki yekukwesana coefficient, kugadzikana kuita, kwete nyore kuchembera, akasiyana tembiricha kushanda uye yakanakisa yekuisa chisimbiso kuita. Asi izvo zvinoitika zveplytetrafluoroethylene, kusanganisira yakakwira yekuwedzera coefficient, kunzwisisika kuchitonhora kuyerera uye kwakashata kwemafuta mafambiro, zvinoda dhizaini yechigaro chisimbiso kuve chakatenderedza aya maitiro. Naizvozvo, kana iyo yekuisa chisimbiso ikava yakaoma, kuvimbika kwechisimbiso kunoparara. Zvakare, kupisa kwekushisa kwe polytetrafluoroethylene yakaderera, uye inogona chete kushandiswa pasi pemamiriro epasi pe 180 180. Pamusoro peiyi tembiricha, iyo yekuisa chisimbiso inozokwegura. Asi tichifunga nezvekushandisa kwenguva refu, inongoshandiswa chete pa120 ℃.
Maitiro aro ekugadzirisa akashata kupfuura evhavha yekumira, kunyanya pneumatic vharafu (kana vharuvhu yemagetsi).
4. Mira vharuvhu : zvinoreva vharuvhu iyo inhengo yekuvhara (disc) inofamba ichitevedza mutsara wepakati wechigaro. Zvinoenderana nekufamba kwedhisiki, shanduko yekuvhura chigaro chevhavha yakaenzana neiyo disc sitiroko. Nekuti kuvhura kana kuvhara sitiroko yevhavha yevhavha ipfupi, uye ine basa rakavimbika kwazvo rekucheka, uye nekuti shanduko yekuvhura chigaro chevhavha yakanangana zvakananga nekurova kweiyo disc disc, inokodzera kwazvo kugadzirisa kuyerera. Naizvozvo, iyi vharuvhu iri kufamba zvakanyanya kuti ishandire pamwe pakucheka kana kugadzirisa uye kupwanya.
① Mukuita kwekuvhura nekuvhara, kukakavadzana pakati pedisiki uye nekuvhara chisimbiso chemuviri wevhavha iri diki pane iyo yevhavhavhavha yepagedhi, saka haina kupfeka.
Opening Kureba kwekuvhura ingori 1/4 chete yevhavha yekugara chiteshi, saka iri diki kwazvo kupfuura vheji yegedhi;
Ally Kazhinji, kune imwechete chete yekuisa chisimbiso pamusoro pomuviri wevhavha uye disc, saka maitiro ekugadzira ari nani uye ari nyore kuchengetedza;
④ Nekuti iyo yekuzadza musanganiswa weasbestos uye graphite, iyo tembiricha inodzivisa yakakwira. Kazhinji, mira mavharuvhu anoshandiswa kune emhepo mavharuvhu.
① Nekuti iko kuyerera kwekufamba kwepakati nepakati pevhavha shanduko, iwo mashoma kuyerera kuramba kweyekumira vharuvhu yakakwira kupfuura iya yemamwe akawanda marudzi emavhavha;
② Nekuda kwekurohwa kwenguva refu, kumhanya kwekuvhura kunononoka kupfuura kuya kwevharuvhu yebhora.
5. Plug vharuvhu : zvinoreva vharuvhu inotenderera ine zvikamu zvakavharwa zvine plunger. Kuburikidza ne90 ° kutenderera, chiteshi chengarava pavhavha yevhavha chakabatana kana kupatsanurwa kubva kuchiteshi chiteshi pane vharafu muviri, kuti uone kuvhura kana kuvhara. Iyo plug inogona kuve iri cylindrical kana conical chimiro. Nheyo yacho yakafanana neiyo yevhavha yebhora. Bhora vharuvhu inovandudzwa pahwaro chivhariso vharafu, iyo ainyanya kushandiswa mafuta munda kudzvanyirirwa uye petrochemical indasitiri.
6. Safety vharafu : rinoreva overpressure dziviriro mudziyo uri kumanikidzwa mudziyo, midziyo kana Mapaipi. Kana kumanikidza mumidziyo, mudziyo kana pombi kukwira kupfuura kukosha kwakatenderwa, vharafu inozovhura otomatiki yozoburitsa muhuwandu hwakazara kudzivirira michina, mudziyo kana pombi uye kumanikidza kubva mukukwira uchienderera; kana kumanikidza kuchidonhera kune yakatarwa kukosha, vharuvhu ichavharwa otomatiki uye nenguva kuti ichengetedze kushanda kwakachengeteka kwemidziyo, mudziyo kana pombi.
7. Steam musungo : mune yepakati yehuya uye yakamanikidzwa mweya, pachave neimwe condensate yakaumbwa. Kuti uve nechokwadi chekushanda uye kushanda kwakachengeteka kwechigadzirwa, aya midhiya asingabatsiri uye anokuvadza anofanirwa kuburitswa munguva yekuona kushandiswa nekushandisa kwechigadzirwa. Iyo ine inotevera mabasa: can inogona kukurumidza kubvisa iyo condensate inogadzirwa; ② kudzivirira kupisa kwemhepo; ③ pedza mweya uye imwe isingadzvinyiriri gasi.
8. Kumanikidza kudzikisa vharuvhu : ivharuvha iyo inoderedza iyo yekupinda kumanikidza kune imwe inodiwa nzira yekubuda nekugadzirisa, uye inovimba nesimba reiyo svikiro pachayo kuchengetedza kuburitsa kwekubuda kugadzikana otomatiki.
9. Tarisa vharuvhu : inozivikanwawo sevhavha-inoyerera vharuvhu, tarisa vharuvhu, vharuvhu yekumashure uye imwe-nzira vharuvhu. Aya mavhavha anovhurwa otomatiki uye akavharwa nesimba rinogadzirwa nekuyerera kwepombi yepayipi pachayo, uye ndeyevharuvhu inowirirana. Tarisa vharuvhu inoshandiswa mupayipi system, basa rayo guru nderekudzivirira kudzoka kwepakati nepakati, kudzivirira pombi uye kutyaira mota kubva kudzoka, uye kuburitsa mudziyo wepakati. Tarisa vharuvhu inogona zvakare kushandiswa kuendesa iyo yekubatsira system ine kumanikidza pamusoro peiyo system kumanikidza. Inogona kuve yakakamurwa kuita swing mhando (kutenderera zvinoenderana nenzvimbo yegiravhiti) uye kusimudza mhando (inofamba ichitevedza axis).
Zvakanakira nekuipira zvakasiyana siyana v ...
Report: Innovative nyowani michina batanidza ...